Chipiri, Zvita 8, 2020 Chipiri, February 2, 2021 Douglas Karr
Nhasi mBlast vatangisa nyowani, yemahara vhezheni yavo mPACT mhinduro. mPACT yakagadzirirwa kubva pasi kumusoro kubatsira vashandisi kuwana mazwi ane simba ane chekuita pamusika wavo nezvinhu zvavari kutaura mumablog, zvinyorwa zvepamhepo, Twitter, Facebook uye zvimwe zvitoro zvepamhepo. PaMBLAST, isu tinotenda iyo chete nzira yekuyera pesvedzero yezwi iri nekutarisa pamisoro uye mazwi akakosha ayo izwi riri kunyora nezvaro. Zvizhinji
Nhau idzi dzizere nedzimwe nyaya dzinoshamisa dzevanhu munguva pfupi yapfuura: Alex Rodriguez anobvuma kune maSteroids (zvinoshamisa zvakasiiwa kubva papeji reMLB.com's AROD peji) Michael Phelps akatora mifananidzo yekuputa poto. Iye akazorasikirwa nemvumo yakakura yekubvumirana neyaKellogg's. Kunyangwe Barack Obama anga aine mavhiki mashoma akaomarara, achiedza kutsvaga nhengo dzemakurukota nekupusha nepakeji inosimudzira iyo iri kunyura mukurumbira. Kune zvakajairika. Mumwe nemumwe wevanhu ava aive pamusoro penyika.